तिलोत्तमा नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु - Butwal Online
बुटवल, १ असार । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम सुरु भएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाका १७ वडाबाट छनोट भएर आएका ३ सय १६ जना उक्त कार्यक्रममा समाबेश भएका छन् ।
उक्त कार्यक्रमको रुपन्देही क्षेत्र नं. १ का सांसद छविलाल विश्वकर्माले उद्घाटन गरे । सो अवसरमा बोल्दै उनले श्रमलाई विगतमा हेप्ने प्रबृत्ति भएपनि अहिले श्रमको सम्मान सवैले गर्न जानेको बताए । कुनै समय देश अस्थिरता तर्फ गएको अवस्थामा श्रमको सम्मान हुन नसकेको भन्दै उनले अहिले स्थिरता संगै समृद्धिको यात्रामा देश बढेको भन्दै श्रम गर्ने श्रमिकहरुकै योगदानले राष्ट्र निर्माण बन्ने उनको भनाई छ ।
उनले आम जनतामा आफ्नो गाउँ आफै बनाउने भन्ने सोच नआउदा सम्म जस्ता कार्यक्रमहरु पनि प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै उनले श्रमका निम्ती सवै तप्पर हुनुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले नयाँ सन्देश दिएको भन्दै श्रममा आएको ह्रास यो कार्यक्रमले प्रेरणा दिने बताए ।
त्यसैगरी नेकपा तिलोत्तमा नगरकमिटिका अध्यक्ष मोहन चापागाईले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उत्कृष्ट कार्यक्रम रहेको भन्दै यो कार्यक्रमले विदेशमा जाने युवाहरुलाई रोक्दै स्वदशमै रोजगारीको सिर्जना गर्न प्रेरणा मिल्ने बताए । तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपप्रमुख जागेश्वरी चौधरीले नगरपालिका भित्रको काममा यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि लैजाने बताईन । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस तिलोत्तमा नगरकमिटि सभापती हरीलाल पाण्डे, तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गुणानिधी भण्डारी, तिलोत्तमा चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष जेपी कंडेल लगाएतले बोलेका थिए ।
नगरपालिकाले वडा नं. १ देखि ६ सम्मका युवाहरुलाई बनबाटिका र ७ देखि १७ वडाका युवाहरुलाई गौशालामा श्रममा लगाएको छ । एक महिना सम्म चल्ने कार्यक्रमका लागि संघिय सरकारले ७० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कृष्ण सापकोटाले जानाकारी दिए । कार्यक्रम नगरपालिकाका प्रबक्ता सुरेन्द्र श्रीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।